Ma run baa in ka sareysa ay yartahay oksijiin? | Saadaasha Shabakadda
Kuwa idinka ah ee fursad u helay inay naftaadu la kulanto, imisa jeer ayaad neefsatay markii aad buur fuuleysay? Taasi ... "Neefta ayaa igu gaaban." Caan ahaan loogu yeero sida, jirridda sare ama soroche. Waa raaxo la'aanta jireed ee isku muujin karta madax xanuun, daciifnimo ama xitaa lallabbo. Waxaa badanaa caan ahaan loo aaneeyaa oksijiin la'aanta markii aan kor u kacno.
Hagaag maya, midna ma maqna mana badna. Ogsijiinku waa sidiisii, had iyo jeer waxaa jira 21% haddii aan hoos u degno iyo haddii aan kor u kacno.. Laakiin bers fuulaya iyo kuwa buuraha fuula oo u fuula meelaha ugu waaweyn sida Everest… Miyaanay sidan dhalooyinka oksijiinta? Haa way tahay. Waqtigan xaadirka ah, waxaa laga yaabaa inaad maskaxdaada ku jirto jahwareer. Cunsurka muhiimka ahi maaha oksijiin laakiin waa, xaddiga hawo ee aynu kor ku hayno. Cadaadiska Hawada.
Sidee cadaadiska hawadu saameyn ugu yeeshaa hawo la'aan?
Maaddaama uu jiro cadaadis yar, wuxuu sababa sambabadeena inay u baahdaan inay sameeyaan dadaal dheeri ah si ay u nuugto hawada marinka neef mareenka. Oo ay la socoto, oksijiin.
Tusaale fiican, waxaan u qaadan karnaa Everest. Iyada oo ku dhow 9.000 mitir sare, Cadaadiska Hawada ee sare waa 0,33 marka loo eego 1 heerka badda. Cadaadiskaas, waa hawo si dhib yar sambabada u gasho, Waxayna qaadataa xad-dhaaf aad u ballaaran in la nuugo. Alveoli si dhib yar ayey ku qaadan kartaa oksijiin si ay ugu gudbiso dhiigga. Waa si sax ah halkaas, halkaasoo la'aantaani, wuxuu keenaa dhammaan cudurrada jireed. Xaaladaha ugu halista badan, barar sambabada iyo xitaa miyir-beel.
Way adag tahay in la qiyaaso sax? Hawada wali waa hawo lagamana yaabo inay aad u khafiif tahay. Isbarbardhig kale. Qiyaas giraangirka bushkuleeti hawo ka buuxdo. Waa inaad "barar badan tahay", dhig cadaadis badan, taas oo ah, hawo badan. Cadaadis badan oo hawo ah, ma jiri doontaa ogsijiin badan, sax, muggaas? Sidoo kale, haddii aan afkeenna kala qaadno (ha isku dayin!) God, god keligiis ah ayaaba galaya iyadoon u ursan.
Markaad isku aragtid xaaladahaas, waad ogtahay. Maaha in oksijiin la waayo oo hoos u joog, waa inaadan wax badan dhuuqi karin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Ma run baa in ka sareysa ay yartahay oksijiin?
Waan jeclaaday, aad baad ugu mahadsantahay sharraxaaddaada, waxaan isweydiinayay waqti dheer runtiina bogagga kale waxay keeneen jawaabo aan micno lahayn. mahadsanid! Dabeecaddu waa cajiib: 3
Ku jawaab Zayra